SAMOTALIS: KHUDBADDA MADAXWEYNAHA JAMHUURIYADDA SOMALILAND EE MUNAASIBADA 18-KA MAY
Maalintani waa mid ku weyn quluubta shacbiga Somaliland. Ma'aha mid ku timi dhayal iyo dheel-dheel, balse waxaa loo soo qubay dhiig badan oo waxaa u shahiiday kumanaan geesi (Allaheen naxariistii jano ha ka waraabiyo).
Madax bannaanida Somaliland waa go'aan ummadeed oo aan gorgortan lahayn.
Adkaynta nabadgelyadu waa shay aasaasi ah, oo muhiimad weyn u leh Qarankan, annagoo ka duulayna taa, waxaanu xoogga saarnay dhismaha ciidammada kala duwan iyo hay'addaha amniga, tayo ahaan iyo tiro ahaanba. Waxaanu ku guuleysanay, 20 sanno ka dib in uu Ciidankeenu derajo kala yeesho. Ilaahay mahaddii, waxa maanta aynu leenahay ciidan la isku hallayn karo, oo caabiyi kara cadaw kasta oo ciiddeenna soo hungureeya.
Dhammaan xarumaha Wasaaradaha iyo Hay'adaha kale ee Dawladda ayaa laga fuliyay dhismayaal casriya, oo beddeley dhismayaashi ay ku jireen, kuwaas oo intooda badan ahaa kuwii Ingiriiska laga dhaxlay 50-sanno ka hor, waxaanay haatan yihiin kuwo u qalma magaca ay xanbaarsan-yihiin iyo adeega bulshada loogu hayo. Waxaa la kordhiyey tirada shaqaalaha oo la gaadhsiiyey in ka badan 20,000. Waxaa kale oo suurto gashay inay dalka yimadaan oo ay hawl ka bilaaban shirkado caalamiya, sida kuwa shidaal baadhista iyo macdanaha. Dhinacyada kale ee arrimaha bulshada sida caafimaadka, horumarinta dhalinyarada iyo qaybo kale oo badan ayaa horumar laga sameeyey.
Waxaanu awoodnay inuu dalku yeesho Idaacad laga wada dhagaysan karo Waddanka gudihiisa iyo dibeddeiisaba. Waxa kale oo la sameeyey Idaacad u gaara Qur'aanka Kariimka ah.
Hawlaha doorashooyinku waa masuuliyad wadareed oo ay wadaagan dhinacyo badan, canaanta dib-u-dhacana waa mid la wada leeyahay. Waxaynu nahay qaran leh shuruuc iyo xeerar haga. Haddaba, marka ay xaaladan oo kale timaado, dastuurka qaranka ayaa qeexaya jidka loo maraayo. Guddida Doorashooyinka Qaranku waxaa ay iisoo gudbiyeen 20/April/2015 qoraal ay ku cadaynayaan in aanay doorashadii xiligeedii ku qaban karin. Aniga oo ka duulaya taladaa, waxaan u gudbiyay Golaha Guurtida oo u xil saaran, awood sharcina u leh qiimeeynta xaaladdan. Ma jiro wax faro-gelin ah oo aan ku lahaa go'aammada kasoo baxay Aqalka Guurtida, waana Hay'ad u madax bannaan xil gudashadeeda. Aniga oo ah Madaxweynihii Qaranka, Madaxweyne Ku-xigeenka iyo Mudanayaasha Golaha Wakiillada, maanu ahayn kuwa maanta iyagu arrintaas ka talinayay, ee waa na loo talinayay. Si kastaba ha ahaatee, waxaynu nahay dal iyo dawlad leh nidaam iyo kala dambayn. Muwaadiniin ahaan, waxaa inagu waajib ah in aynu u hogaansanno, isla markaana tixgelino shuruucda iyo xeerarka aynu dhiganay.
Sidaa darteed, go'aanka Golaha Guurtidu waa mid dastuuri ah, waxaanu ku baaqnay kulan turxaan bixin ah, oo aanu isugu nimaadno saddexda xisbi qaran. Dhammaan dhinacyada ay arrintani khusayso (muxaafid iyo mucaarid), waxaan u soo jeedinayaa in aynu khilaafkeena ku dhamaysanno wada hadal, wada tashi iyo walaaltinimo. Waan soo dhawaynayaa, waanan uga mahadnaqayaa Madaxda Xisbiyada mucaaridku aqbalka ay kaga jawaabeen marti-qaadkaa. Waxaan ku kalsoonahay in aynu nahay bulsho bisil oo xaalad kasta oo ku timaadda kaga gudubta wada tashi, isu dul-qaadasho, is-qancin, midnimo iyo wada jir. Haddaba, waxaan kula dardaarmayaa masuuliyiinta qaranka ee madashan isugu imanaya in ay mar walba danta guud ee qarankan ka hor mariyaan wax kasta, isla markaana ay maanka ku hayaan ilaalinta qarannimada, dhawrista shuruucda, adkaynta nabadgelyada iyo midnimada umadda ay matalaan.
Sabirka iyo dulqaadku ma'aha doqoniimo, balse, waxaan u aqaan sahayda siyaasiga suuban.
Marlabaad, ragga uu hungurigu ka hayo in ay dalkan madax ka noqdaan, waxaan leeyahay: "waar damiicina ku dara tudhaale iyo lexo jeclo, oo waa la doogiye yaanla dacaroon"
Waxaa xusid mudan, in aannu beesha caalamka ka codsannay inay na dhex-galaan annaga iyo walaalahayo Somalia, hasa yeeshe, weli wax jawaab ah, oo wax ku ool ah kamaanu helin. Haddaba, waxaa isu-kay qaban la' sida dawladaha qaarkood ugu degdegayaan faro-gelinta arrimaha gudahayaga ee aanu ku filannahay iyo sida ay uga warwareegayaan ama isu diidsiinayaan dhex-dhexaadinta is marin-waaga ka aloosan dalalka Somaliland iyo Somalia, taas oo xal-u-heliddeedu muhiimad weyn u leedahay xaqa aayo ka-tashiga ummaddayada iyo guud ahaanba xasilloonida mandaqada Geeska Afrika.
Si ay mandaqadda Geeska Africa u noqoto mid xasilloon oo ay shucuubteedu nabad ku wada noolyihiin, waxa Xukuumadayda ka go'an in ay sii xoojiso xidhiidhka iyo iskaashiga ay la leedahay dalalka Deriska.
Labels: NEWS, POLITICS, Somaliland, Somaliland Videos